‘प्रचण्डले ल्याएको तरंगले पार्टी फुट्दैन, बरू गतिरोध तोड्छ’ « Janata Samachar
प्रकाशित मिति :9February, 2019 10:34 am
पार्टी एकताको आठ महिनापछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पूर्व माओवादीको प्रशंग निकाल्नुभएको छ । शान्ति प्रक्रियाको मर्म र संविधानको भावना बिपरीत काम भए फेरि माओवादी जन्मन सक्ने चेतावनी दिएपछि राष्ट्रिय राजनीति र नेकपा पंक्तिभित्र तरंग नै आएको छ । पार्टी एकीकरण नभई विभाजन त हुँदैन भन्ने चिन्ता पनि देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा हरेक बिहान ६:३० बजे रेडियो जनताबाट प्रशारण हुने कार्यक्रम समय सम्वादमा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवम् राजनीतिक विश्लेषक बिष्णु रिजालसँग सइन्द्र राईले गरेको सम्वादको सम्पादित अंश ।
–परिस्थितिले उहाँलाई त्यहाँ पु¥याएको छ । यसअघि के विषयमा कडा बोल्ने ? एउटा अध्यक्षले सरकार चलाउनुभएको छ र एउटा अध्यक्षले पार्टी । उहाँहरुकै सल्लाहमा सरकार र पार्टी चल्दै आएको छ । अध्यक्ष प्रचण्ड फुल्ली पार्टी काममा हुनुहुन्छ । उहाँबाटै पार्टी एकतामा अझ तदारुकता आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि आशा हो । सायद, विविध कारणले सक्नु भएको छैन । यी सवै परिस्थितिले यस्ता अभिव्यक्ति दिनुपर्ने ठाउँमा पु¥याएकी जस्तो लाग्छ ।
–मैले जे भने त्यही पार्टी हो भन्ने हेडक्वाटर प्रणालीबाट हुँदैन भनेरै पार्टी एकता भएको हो । ०६४ मा त्यस्तो अवस्थाको पार्टी ०७० मा यस्तो भयो । अव, ०७४ कहाँ पुग्ला भन्ने बुझाइले नै पार्टी एकता भएको होला । हुनत, अहिले नेकपामा पनि हेडक्वाटरकै अवस्था बन्ने अवस्था आएको छ । पार्टी प्रणाली भन्दा व्यक्ति हावी हुने ।
हामीले भन्दै आएका छौं । प्रणाली बलियो हुनासाथ नेतृत्व बलियो हुन्छ । फलानाले गर्दा पार्टी एकता भयो । फलानाले गर्दा बहुमत आयो भन्ने ठीक होइन, यसको विरोध हुँदै आएकै छ । अहिले त, प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरालाई पनि व्यक्तिको कुरा हो, संस्थागत निर्णय त सचिवालयले गरिसकेको छ भन्ने अवस्था आयो । यसले कमिटी प्रणालीलाई संस्थागत गर्न सकेका छौं कि छैनौं, पार्टीमा सवैको स्वामित्व लिन सकेका छौं त ? आजको समीक्षाको विषय हुनुपर्छ ।
–हिजो सैद्धान्तिक आधार र कार्यक्रम नै फरक थियो । तर, तत्कालीन एमाले र माओवादीले फरक भएर बस्नुको अर्थ थिएन । संविधान निर्माण भइसकेपछि सैद्धान्तिक आधार बनेको थियो । यसकारण पार्टी एकता भएको छ । अर्को, फुटको सिकाइबाट अहिले नेकपा बनेको हो ।
विवाहका बेला पारपाचुकेको कुरा धेरै गर्दैनन् । अहिले त्यतातिरको कुरा गर्दैनौं । अहिले पार्टीको एकता प्रक्रिया टुंग्याउने कुरा महत्वका हुन् । तर, कार्यशैली र अहिलेको परिस्थिति बदल्न जरुरी छ ।
पूर्वतिरका एउटा प्रसंग– बैठकमा कुनै कमरेडले रिर्पोटिङ गर्न थाल्नुभएछ । पार्टी बेलुकी फलाना ठाउँमा सुत्यो, बिहान यसो ग¥यो, दिउँसो यसो ग¥यो । कुरा के रहेछ भने रिर्पोटिङ गर्ने कमरेड पार्टी सचिव हुनुहुँदो रहेँछ । उनले जे–जे गरेको हो, त्यसैलाई पार्टीले ग¥यो भन्नु हुँदो रहेछ । अहिले त्यस्तै–त्यस्तै अवस्था अहिले नेकपामा देखिन थालेको छ ।